Loka momba ny fizahantany kaontinanta vaovao natolotry ny Birao fizahantany afrikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Loka momba ny fizahantany kaontinanta vaovao natolotry ny Birao fizahantany afrikanina
Travel Travel • Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Awards • Vaovao Mafana Botswana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Vaovao Mafana Ghana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Nizeria • People • Vaovao farany momba ny Qatar • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Loka momba ny fizahantany kontinanta any Afrika
Ho fankasitrahana ny laharam-pahamehana nataon'ny mpitondra fanjakana afrikanina sy ny toetra manandanja hafa amin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny fizahantany any afrika, dia natolotry ny Birao fizahantany afrikanina (ATB) ho an'ny mpitarika sasany izany.
Teo ambany fanamelohana ATB dia nandray anjara tamin'ny Expo ireo solontena avy any ivelan'i Afrika Atsinanana. Anisan'izany ny solontena avy any Etiopia, Botswana, Nizeria, Ghana, ary Qatar.
Ny orinasam-pizahantany kaontinantaly dia nanolotra mari-pankasitrahana ireo olo-manan-danja eto Afrika izay miorina ao ambadiky ny fampandrosoana sy ny fahombiazan'ny fizahan-tany.
Ny ATB Continental Awards dia natolotra ny olona avy amin'ny faritra jeografika rehetra any Afrika.
Ny voalohany nahazo ny ATB's Continental Tourism Awards 2021 dia ny filoham-pirenen'i Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ho fankasitrahana ny fahavononany sy ny anjara birikiny hampandroso ny fizahantany Tanzania.
Ny fampisehoana ireo Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) Ny sabotsy dia notanterahina ny loka nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampirantiana ny fizahan-tany ho an'ny fizahantany afrikanina voalohany (EARTE) izay natao tao Arusha tanànan'ny fizahantany Tanzania Avaratra.
Ny filoha dia nitarika tamin'ny famitana ny fanadihadiana momba ny Royal Tour mampiseho an'i Tanzania Toeram-pizahantany, ankoatry ny hetsika hafa noraisin'ny Filoham-pirenena hanatsarana ny fampandrosoana ny fizahantany any Tanzania sy Afrika.
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina dia nomena andraikitra hampiroborobo sy hanamora ny fitomboan'ny fizahan-tany sy ny fampandrosoana manerana ny kaontinanta.
Nanolotra ny mari-boninahitra nomeny ny Lehiben'ny Firenena Tanzaniana, ny filohan'ny ATB Andriamatoa Cuthbert Ncube, dia nilaza fa ny filoham-pirenena Tanzaniana dia nanome toky fa ny indostrian'ny fizahantany dia nibolisatra tao anatin'ny valanaretina COVID-19.
Ny minisitry ny harena voajanahary sy ny fizahantany tanzaniana, Dr. Damas Ndumbaro, dia nahazo ny loka tamin'ny anaran'ny filoham-pirenena.
Mpandray hajaina hafa nahazo ny mari-pankasitrahana momba ny kaontinanta afrikanina 2021 dia ny minisitry ny fizahan-tany sy kolontsaina any Sierra Leone, Dr. Memunatu Pratt, izay anisan'ireo olona manatrika ny EARTE avy any ivelan'ny vondrom-piarahamonina Afrikana Atsinanana (EAC).
Taorian'ny nahazoany ny loka dia nilaza i Dr. Pratt fa faly izy handray anjara amin'ny EARTE ary faly nahita fampirantiana fizahan-tany isam-paritra toy izany tany Afrika. Handefa hevitra any amin'ireo fanjakana afrikanina Andrefana izy hananganana fampirantiana fizahan-tany toa izany.
Ny mpandray loka ambony hafa an'ny ATB dia ny minisitry ny harena voajanahary sy fizahantany tanzanianina, Dr. Damas Ndumbaro; Andriamatoa Najib Balala, ny minisitry ny fizahantany any Kenya; Andriamatoa Moses Vilakati, minisitry ny fizahan-tany ao amin'ny fanjakan'ny Eswatini; ary ny minisitry ny fizahantany any Botsoana, Philda Kereng.
Ny sabotsy 9 oktobra lasa teo dia natomboka ny asabotsy 11 oktobra ny Expo isam-paritry ny fizahan-tany EAC izay omena alalana hitsidika ireo fizahan-tany manan-tantara ao Tanzania hatramin'ny 16 Oktobra, ao anatin'izany ireo toeram-pizahan-tany malaza.
Ny Expo fizahan-tany isam-paritra, izay karazany voalohany, natao tany amin'ny faritra Afrika Atsinanana, dia mikendry ny hampiroborobo ireo fizahan-tany fizahan-tany misy any amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny EAC ao Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ary South Sudan.